China Enrofloxacin Isixazululo Oral 10% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
Isixazululo somlomo se-Enrofloxacin 10%
IZILWANE EZIJOLILE: Izinkukhu namakaraskhi.
- Ukutheleleka ngomgudu wokuphefumula, wokuchama nowesisu obangelwa yi-Enrofloxacin micro micro sensitive
Izinkukhu: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida ne-Escherichia coli.
Ama-Turkeys: I-Mycoplasma gallisepticum, i-Mycoplasma synoviae, i-Pasteurella multocida ne-Escherichia coli.
- ukutheleleka kwamagciwane kwesibili, njengezinkinga zezifo zegciwane
Isikali Nomzila Wokuphatha
Ukuphathwa ngomlomo ngamanzi okuphuza. Shake kahle ngaphambi kokusetshenziswa.
Isikali: 50 ml ngamalitha angu-100 amanzi okuphuza, phakathi nezinsuku ezi-3-5 ezilandelanayo.
Amanzi okuphuza anemithi kufanele asetshenziswe kungakapheli amahora ayi-12. Ngakho-ke lo mkhiqizo udinga ukuguqulwa nsuku zonke. Ukuncela amanzi kweminye imithombo, ngesikhathi sokwelashwa kufanele kugwenywe.
Ungaphathi uma kwenzeka hypersensitivity noma ukumelana ne-Enrofloxacin. Ungayisebenzisi i-Prophylaxis. Ungayisebenzisi lapho ukumelana / ukumelana nokuphambana ne-quinolone (ufulawa) kwaziwa ukuthi kwenzeka. Musa ukuphatha izilwane ezinesibindi esikhubazeke kakhulu kanye / noma umsebenzi wezinso.
Ukusebenzisana Neminye Imikhiqizo Eyelaphayo
Ukusetshenziswa ngasikhathi sinye namanye ama-antimicrobial, i-tetracyclines nama-antibiotic e-macrolide, kungahle kube nomphumela wokuphikisana. Ukuncipha kwe-Enrofloxacin kungancishiswa uma umkhiqizo uphathwa kanye nezinto eziqukethe i-magnesium noma i-aluminium.
Inyama: izinsuku ezingu-9.
Amaqanda: izinsuku eziyi-9.
Izinyathelo Zokuqapha Ezikhethekile Zokusebenzisa
Hlanza izimbiza zokuphuza kahle ukuze uvikele ukutheleleka kabusha kanye nenzika.
Gwema ukubeka amanzi okuphuza elangeni.
Linganisa kahle isisindo sesilwane ukuze ugweme okungaphansi, nokudlula ngokweqile.
Langaphambilini Isixazululo se-Doxycycline Oral 10%
Olandelayo: Ukumiswa kwe-Fenbendazole Oral 5%
I-Enrofloxacin And Bromhexine Oral Solution
ILevamisole Hydrochloride ne-Oxyclozanide Oral ...
Isixazululo somlomo se-Diclazuril 2.5%
Isixazululo Somlomo seFlorfenicol 5%
I-Bromhexine neMenthol Solution Oral 2% + 4%
Isixazululo se-Toltrazuril Oral 5%
I-Vitamin E ne-Selenium Oral Solution 10% + 0.05%